Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika : Nandiso fanantenana ny vahoaka Rajoelina
Pôlitika : Nandiso fanantenana ny vahoaka Rajoelina
Mbola tsy ampy enim-bolana akory no nitondran’i Andry Nirina Rajoelina dia diso fanantenana tanteraka amin’ny fanjakany ny vahoaka Malagasy.
Raha vao nitsangana ny governemanta dia tezitra ny tanindrana satria tsy nahitana « minisitra côtier » raha tsy dimy monja tamin’ireo 22 notendren’ingahy Andry Rajoelina sy Ntsay Christian. Nandeha hatramin’ny fifandatsana aza tamin’izany satria ny tanindrana mihitsy no nifidy ity kandidà ity. Ny teto Imerina izay nihavian’ingahy Andry Rajoelina dia ingahy Marc Ravalomanana no niantefan’ny safidin’izy ireo. Tena mitaraina amin’izany mafy ny tanindrana ankehitriny.
Ny fahadisoam-panantenana taorian’izay dia ny mahakasika ny fanendrena ny mpiasam-panjakana ambony hampihodina ny asam-panjakana. Ny iray voalohany dia ny fahitana fa ny mpiasa teo aloha izay nanao kravaty manga ka nivavaka tamin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ihany no navadika toerana. Ireo izay nanompo ny Tgv sy ny Mapar anefa nojerem-potsiny toa ny tany nahalavoana. Mbola olana ihany koa ny fanomezana vahana ireo antsoina hoe “diaspora” izay Malagasy mpila ravinahitra tany ivelany ka rehefa reraka avy any dia niseho azy ho lohan’ny fanjakana Rajoelina ankehitriny ka miandraikitra toerana maro ambony eto amin’ny firenena. Misy amin’izy ireny no tsy mety sy menatra miteny Malagasy mihitsy toa an’ilay ramatoa antsoina hoe Anja Rama izay talen’ny fifandraisana iraisam-pirenena, toa izany koa ny mpiandraikitra ny arofenitra tao amin’ny filoham-pirenena antsoina hoe “Mme Michou” izay nanivaiva ny ampanjaka sy ny Tangalamena ary ny Andriana sy ny raiamandreny ara-drazana teto Madagasikara ny faha 19 janoary 2019 teny Iavoloha. Natao mpiasam-panjakana ambony ao amin’ny ambasady ao Parisy ity olona ity rehefa nahavita izany.
Mbola amin’ny raharaham-panjakana izay ihany dia tsy nahavita nanendry ny mpiasam-panjakana ambony ny governemanta Ntsay Christian tao anatin’ny telo volana mahery. Raha ny vavan’ingahy Rajoelina tany amboalohany anefa dia toa hanidina mihitsy i Madagasikara amin’ny fampandrosoana ataony. Vokatr’izany dia mikatso ny raharaham-pirenena ankehitriny. Na ny vola ho entina hampihodinana ny raharaham-panjakana aza dia olana avokoa ankehitriny.
Ny fahadisoam-panantenana manaraka dia ny fanakanana an-kolaka ny olom-pirenena hafa ivelan’ny kandidàm-panjakana hirotsaka ho fidiana ho solombavambahoaka. Isan’ny olana goavana amin’izany ny fampiakarana ny saram-pilatsahana ho 5 tapitrisa ariary. Ny mpanam-bola sy ny antokon’ny fitondrana ihany no afaka nirotsaka noho izany. Ny tena olana nefa dia kandidà maloto ny ankamaroan’ireo manam-bola ireo. Firy moa ny migadra amin’izao fotoana izao, ary firy no voarohirohy amin’ny fitsarana? Misy aza kandidà any am-ponja no nahavita filatsahan-kofidiana nefa voarohirohy amin’ny resaka “kidnapping”.
Tsy ireo kandidàn’ ny fanjakana ihany no maloto fa maro koa ireo tsy miankina no voarohirohy amin’ny raharaha any amin’ny fanjakana. Mpanao bizina sy aferafera maloto avy ny ankamaroan’izy ireny.
Tsy ireo ihany no nandiso fanantenana ny olona amin’ity fanjakan’ingahy Andry Nirina Rajoelina ity fa ny fanamparam-pahefana mitranga amin’izao fotoana izao. Isan’ny fanesorana ny tsy ho mpiasam-panjakana ireo ECD sy EFA ary mpiasam-panjakana raikitra araka ny navoakan’ny filan-kevitra ny minisitra ny alarobia faha 17 aprily 2019 lasa teo.
Isan’ny andrasan’ny mpiasa koa nefa tsy ataon’ingahy Andry Nirina Rajoelina hatramin’izao ny filazany fa hasondrotra ny karaman’ny mpiasam-panjakana ka hatao 200 000 ariary ny farany ambany.
Fandroahana indray no hahazo azy ireo ankehitriny. Fanapahan-kevitra izay nandiso fanantenana tanteraka ny mpiasam-panjakana. Resaka moa izao mandeha any amin’ny ministera sy toeram-piasana isan-karazany izao eto Antananarivo izay mahakasika ity raharaha ity.
Fa isan’ny nandiso fanantenana ny vahoaka Malagasy koa ny mahakasika ny fanitsiana ny Lalàmpanorenana izay hampiarahana amin’ny fifidianana izay ho solombavambahoaka amin’ny faha 27 may 2019 izao. Tsy mba fanitsiana intsony no hatao fa fanoloana tanteraka ny Lalàmpanorenana mihitsy. Tsy hay tenenina intsony ny mahakasika fandikan-dalàna nataon’ny fanjakana tao anatin’ny telo volana izay. Hatramin’ny fividianana ny vary mora. Vola avy aiza ary nahoana no tsy hazavaina tsara ny momba azy io satria lasa fitaovana fanaovana fampielezan-kevitra ny kandidàm-panjakana izy ity ankehitriny.
Maro no zavatra nahadiso fanantenana ny vahoaka ankehitriny. Hita sy tsapa fa kobaka am-bava no ataon’ny mpitondra fanjakana. Tsy tafavoaka ny velirano sy ny IEM izay nokasain’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Mbola ny soritr’asa nataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina ihany aloha no ataon’ity fanjakana ity miaraka amin’ny mpamatsy vola nahazatra hatramin’izay. Diso fanantenana tanteraka ny vahoaka noho izany.
Fitakian’ny Seces Antananarivo : Ny filohan’ny Oniversiten’Antananarivo no ao andamosiny?
Kandida IRD Anosizato Andrefana : Tsy ankasitrahan’ny mponina fa mersenera
Pôlitika : Lasa ady an-tranon’ny IRD ny raharaha
Ifanadiana : Kandida IRD roa no voarain’ny OVEC
Ministeran’ny Indostria : Tena sahy hiaro tokoa ny orin’asa malagasy ve?
Lakandranon’i Pangalana : Voafahan-dalitra indray ny filohampirenena
Fanodinkodinana volam-panjakana : Mbola nisy tamin’ny fitsidihan’ny Papa François teto?
Ben’ny Tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa : « Madio aho niditra teto ary madio aho mivoaka eto”
Andranomena-Analavory : Mbola hahavita mazia ihany ve ireo mpangala-tany ?
Vidin’entana : Tsy mitsaha-mitombo